Mrs. March, nguCristina Feito
Uma umbhali omusha onjengoCristina Feito eqhathaniswa no-Patricia Highsmith, umthwalo wemfanelo ulenga njengenkemba ka-Damocles elinde ukugxekwa okuvamile kwabafundi ukuze kugcine sekugwetshiwe udaba. Ukuqinisekisa ukuqhathanisa okulungile, njengoba umbono ukhomba njengoba lo msebenzi usakazeka, ucabanga ukuthi ...
I-Nostalgia for the Amphibian Woman, nguCristina Sánchez Andrare
Njengoba uSabina ayengasho, “akukho ukulangazelela okubi njengokulangazelela okungakaze kwenzeke, okungakaze kwenzeke.” Ngaphansi kwekhethini leqiniso, izinganekwane zakha lolo hlobo lwe-nostalgic epic ekhulisa amaqiniso noma ewenza angavamile. Ekugcineni kukhona inhlanganisela yazo zombili izinhlangothi zamaqiniso. Izincwadi zikaChristina...
UMnu. Wilder kanye nami ngu-Jonathan Coe
Esesha indaba ekhuluma kuleyondawo yonke eyembuleka ebuhlotsheni babantu obusafufusa, u-Jonathan Coe, yena, ukhuluma ngobuhle bemininingwane ejulile. Kunjalo, u-Coe akakwazi ukukushiya lokho kubaluleka okuningiliziwe akuqondakalisa ngezincazelo eziphelele kakhulu. Kusuka…
Ukumangala, nguRichard Powers
Umhlaba awusazwani ngakho-ke ukudideka (ngiyaxolisa ngehlaya). I-Dystopia iyasondela ngoba i-utopia yayihlale ikude kakhulu empucukweni efana neyethu ekhula ngokushesha ngenani njengoba ubunikazi obuvamile buncipha. I-Individualism izalwa. ...
Iqhawe elingalindelekile kakhulu lohlobo lomseshi elibuka esibukweni sika-Vázquez Montalbán. Ngoba uMelchor Marín uwukuzalwa kabusha, ngokuhlukahluka kweploti yesikhathi-sesikhathi esifanele, yalowo Pepe Carvalho owasihola emahhovisi amnyama noma phakathi kobusuku obumnyama kakhulu e-Barcelona. UJavier Cercas unweba ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi131 Okulandelayo →